February 2012 | အ င်္လ ကာ ည
Ngar Nit Ko Chit Tal
1:31 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
ငါ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ တလွင့်လွင့်မျောလို့
ဆိုတော့ကာ အနာဂတ်ကလည်း မရှင်သန်နိုင်ဘူး..။
ငါက တိကျစွာဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ နတ်ဆိုးတစ်ကောင်..။
ဒါပေမယ့် လမ်းခုလတ်တင် လမ်းကပျောက်သွားတယ်
7:51 PM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
့လောက၌ ဝေဖန်သူနှင့် ဝေဖန်ခံရသူ နှစ်မျိုးရှိ၏။
ဝေဖန်သူသည် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် ဖြစ်၏။
ဝေဖန်ခံရသူသည် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်၏။ အကောင်အထည်ဖော်ရသူဖြစ်၏။
ဝေဖန်ခြင်းအလုပ်သည်ကား လွယ်၏။ မည်မျှပင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါမူ
ဆိုးသည်ဟု ပြောလျှင်လည်းဖြစ်၏။ ကောင်းသည်ဟု ချီးမွမ်းချင်လည်းရ၏။ ဝေဖန်ခြင်းသည် ဝေဖန်သူ၏ အလုပ်ဖြစ်၏။
မှန်ကန်စွာဝေဖန်ဖို့တော့ လိုသည်။ သို့မှသာ ဝေဖန်ခံရသူအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့်အပြင် ဝေဖန်သူအတွက်လည်း မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်မြတ်သော အတွေးအခေါ်အယူအဆကို နှလုံးသွင်းပါမှ မှန်ကန်သည့်ဝေဖန်မှုဖြစ်နိုင်၏။
လူအများစုမှာ တစ်ခုခုအပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုရာတွင် အများအားဖြင့် မိမိ၏ အတ္တ၊ မာနတို့ကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြ၏။ ဝေဖန်ရာမှအတင်းအဖျင်းသို့ရောက်သွား
တတ်သေးသည်။ဖြစ်သင့်သည်ထက် ဖြစ်ချင်သည့်ဆန္ဒက လွန်ကဲနေ၏။ နေရာတိုင်းတွင် မတူညီမှုများဖြင့် ကွဲပြားနေတတ်၏။
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုး ဆိ်ုသည့်အတိုင်း လူအမျိုးမျိုး စိတ်အဖုံဖုံရှိကြသေးသည်။ ကိုယ့်အတွေးအခေါ် ကိုယ့်အယူအဆသည် အမှန်ဟု ယူဆတတ်ကြသူများ၏။ မိမိလုပ်ကိုင်သမျှ အရာအားလုံးသည် အမှန်ချည်းသာ ယူဆတတ်ကြ၏။ ဝေဖန်မှုအလုပ်ကို လုပ်မည်ဆိုရင် တစ်ပါးသူကို ဝေဖန်ခြင်းမပြုမှီ မိမိကိုယ်ကို ဦးစွာဝေဖန်သင့်၏။ အများက ဝေဖန်သဖြင့် ပြုပြင်ရခြင်းထက် မိမိကိုယ်မိမိ် ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြုပြင်ခြင်းက ပို၍
ကောင်း၏ အချို့က ဝေဖန်ခံနိုင်သော်လည်း အချို့က ဝေဖန်မခံနိုင်သဖြင့် ဝေဖန်သူနှင့် ဝေဖန်ခံရသူကြား ပဋိပက္ခ
သို့အတွက်ကြောင့် မည်သည့်အလုပ်မဆို အတွေးမှန် နှလုံးသွင်းပါမှ အမြင်မှန်ရနိုင်ပေသည်။ ဝေဖန်သူက အကောင်းမြင်စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီး ဝေဖန်ခံရသူကလည်း အမှားကိုအမှန်အဖြစ် ထောက်ပြပေးသည်ဟု ယူဆမိခဲ့လျှင်.........
2:26 AM | Labels: ဆောင်းပါး
4:11 AM | Labels: ဆောင်းပါး
ဘတ်စ်ကားက တစ်ဆိတ်ကြပ်လွန်းလှသည် ……………
လွတ်ထားသောလွယ်အိတ်ကြိုးကိုကိုင်ကာရှေ့ကိုပို့လိုက်သည်။ အထူးကားကို တက်စီးသော်လည်း မနက်ပိုင်း ရုံးတက်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့်လူတွေက ပြည့်ကြပ်ညပ်သပ်လျှက်…………………….
လူတွေကြပ်လို့ တိုးရင်းတိုးရင် ကျွန်တော်လည်းတဖြည်းဖြည်း ကားအတွင်းပိုင်းကိုရောက်လာသည်။ အ၀ပိုင်း တွင်ဆင်းရလွယ်အောင် လူတွေကပ်သပ်နေသောကြောင့် လူများပြီး ကြပ်နေသော်လည်းနောက်ပိုင်း တွင်တော့နည်းနည်းချောင်သလိုရှိသည်။
လူတွေကြပ်နေသောကြောင့် အနံ့မျိုးစုံရနေသော်လည်း ကျွန်တော်ရပ်နေသည့်နားတွင်တော့ သင်းပျံ့ပျံ့ရနံ့တစ်မျိုးရ၍နေသည်။
ကျွန်တော့်ရှေ့တွင်ရပ်နေသော လှတပတ ကောင်မလေးဆီက ရနေခြင်းဖြစ်သည်။ ( လှတ နှင့် ပတ ညီအစ်မများမဟုတ်ပါ။ တွဲ၍ဖတ်ပါ - ဤကားစကားချပ်)
ကားက ခုန်လိုက်တိုင်း ကောင်မလေးဆီ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က ပြေးပြေးကပ်သွားသည်။ တတ်နိုင်သလောက်ထိန်းထားသော်လည်း ဘတ်စ်ကားကို လေယာဉ်ပျံထင်ကာ မောင်းနေသော ကားသမားနှင့်မြန်မာပြည်ကားလမ်းကကျွန်တော့်ကိုမျက်နှာသာမပေးပါ။
ထို့ကြောင့် လွယ်ထားသောလွယ်အိတ်ကိုရှေ့ကို တင်းတင်းဆွဲကပ်ထားလိုက်သည်။
သို့မှပင် စိတ်ချလက်ချနေ နိုင်တော့သည်။ ကားကခုန်နေသော်လည်း လွယ်အိတ်နှင့်ဆိုတော့ စိတ်ချ လက်ချဖြစ်သွားသည်။
ရနံ့လေးတသင်းသင်းနှင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောကျနေတုန်း ကောင်မလေးကလှည့်ကြည့်လာသည်။ မျက်ဝန်းလေးတွေကလည်းအတော်လှပါသည်။ ကျွန်တော်ဖျတ်ကနဲတောင် ရင်ခုန်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးမျက်ဝန်းတွေက ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်။ ဒေါသရောင်သန်းနေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတောတော့ကျွန်တော်မသိ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း မသိလိုက် မသိဘာသာ နေလိုက်သည်။
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက မကြာခဏလှည့်ကြည့်လာသည်။ ကျွန်တော့်ကသူ့နောက်ကဆိုတော့ သူလှည့်ကြည့်တိုင်းမြင်နေရသည်။
ပိုဆိုးတာတာက ကောင်မလေးကတစ်ခါလှည့်ကြည့်တိုင်း မျက်ဝန်းထဲကဒေါသရောင်တွေ ပိုပို တောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ရှင့်မှာနှမ မရှိဘူးလား မေးတာလေ….
ရှင်က…….ကျွန်မနောက်ကနေပြီး ကားကြပ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး အသားယူနေတာလေ… တောက်…..
ခင်ဗျားကိုနောက်ကနေ အသားယူတယ်ပြောရအောင် ကျုပ်က ဘာလုပ်နေလို့တုန်း
ခင်ဗျားမဟုတ်ကဟုတ် က လာမပြောနဲ့
ဒီမှာ ခင်ဗျားကို ကျုပ်ဘာလုပ်လဲ ကဲခပ်ရှင်းရှင်းပြော ကျုပ်ဘာလုပ်လဲ
တစ်ချို့က ကျွန်တော့်ကို ရွံရှာသည့်မျက်လုံးတွေနှင့်ကြည့်နေသည်မို့ ဒီကိစ္စကိုရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဒီမှာ ခင်ဗျားပြောလေ … ကျုပ်ခင်ဗျားကိုအသားယူတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ?? ကျုပ်ကဘာလုပ်တာလဲ???
ပြောလေဗျာ ပြော ဒီမှာလူတွေအများကြီး ကျုပ်ကကျုပ်လိပ်ပြာကျုပ်လုံတယ်…….
အောင်မာ ရှင်ကခုမှ သူတော်ကောင်းလို့အသံကောင်းဟစ်မနေနဲ့ ကျွန်မ ကပြောရခက်လို့ရှင့်
ဒီမှာ မအ၀ှာ ခင်ဗျားမပြောလို့တော့မရဘူးလေ ကျုပ်က ကျုပ်မလုပ်လို့ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်ယုံတယ် ပြောမှရမယ်
ကောင်မလေးကတွေကနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်…………မျက်နှာကလဲပိုရဲတွတ်လာသည်။ နောက်တော့ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ဟန်ဖြင့်…..
ရှင်လေ ကျွန်မနောက်ပိုင်းကို နောက်ကနေ ဘာကြီးနဲ့လဲမသိဘူး လာလာထိုးနေတာ
ပြီးတော့ အဒီဟာကြီးကပူပူ နွေးနွေးကြီး..
ကားပေါ်ကဆင်း ဖို့လုပ်သည်။ အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေး ကျွန်တော်မလုပ်မိတာသေချာသည်။
နေဦးဗျ ဒီကိစ္စ ကျွန်တော်မလုပ်တာသေချာတယ်
ရှင်က ခုထိငြင်းတုန်းလား ဟင်.
နောက်မှသတိရတော့သည် သေလိုက်ပါတော့ ဟုသာကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်မိသည်။
နေဦးဗျ ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး လုပ်တာက ဒီကောင်……….
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဒီကောင်လုပ်တာ…………….
ကောင်မလေးကတော့ရှက်လွန်းလို့ထင်။ မျက်နှာကြီး ရဲရဲတွတ်နေသည်။
တွေ့တယ်မလား ကျွန်တော်ပြောသားပဲ ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဆိုတာကို………..
ကျွန်တော့်မှာတော့ ပြောင်းဖူးကြိးကိုကိုင်ကာ ကားတစ်ကားလုံးကို တဟီးဟီးနှင့်ရယ်ပြလိုက်သည်။
အော် …ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား အရပ်ကတို့ရယ်….
8:26 PM | Labels: ဆောင်းပါး
မကောင်း။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်အားလုံးပြေလည်သွားနိုင်သည်။
(ခ) တစုံတယောက်က သင့်ထံမှ ပိုက်ဆံချေးငှားသည်။
တကယ်တော့ သင်က မချေးချင်။သို့သော် ငြင်းရမှာ အားနာ၍ ချေးလိုက်သည်။ (ပြီးတော့ သင်က
ငွေပြန်တောင်းရမှာကိုလည်း အားနာနေဦးမည် ဖြစ်သည်။) ထိုနေ့မှစ၍ငွေပြန်မရမချင်း သင်မပျော်တော့။ ဤနေရာတွင်လည်း အားနာခြင်းသည် သင်၏ပကတိစိတ်အရင်းခံကို ကွယ်ဝှက်၍ မပြတ်မသား ဆုံးဖြတ်ခြင်း မျိုးဖြစ်ရာကုသိုလ်မရသည့်အပြင် အကုသိုလ်အား ၀ယ်ယူသကဲ့သို့ဖြစ်သော အားနာခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ မြန်မာအများစုတွင် ဖြစ်တတ်သော အားနာမှုမျိုး ဖြစ်သည်။ အကြွေးပြန်တောင်းရမည်ကို တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ မိမိ၏ အားလပ်ရက်ခွင့်ကို ယူရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ တန်းစီရာ၌ မိမိရှေ့တွင် ကြားဖြတ်၍ တန်းစီသူကိုမလုပ်ရန်ပြောဖို့ ၀န်လေးကြသည်။ မိမိနှင့် ချိန်းဆိုထားသောအချိန်တွင် တိကျစွာ ရောက်မလာသူအား ထောက်ပြသတိပေးရန် တွန့်ဆုတ် အားနာနေတတ်ကြသည်။
ဤအားနာခြင်းမျိုးသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း၏စာသားလေးတွေသဘောကြလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ် ...
8:56 AM | Labels: ဆောင်းပါး
ဇန်န၀ါရီလဆန်းက ကျွန်တော့် GSM ဖုန်းထဲကို Message တစ်ခု ၀င်လာပါတယ်။
အဲဒါကတော့ Prepaid စနစ်သုံးချင်ရင် Yes လို့ ပြန်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပါ။
ကျနော်လည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ပဲ ပြန်ပို့မိပါတယ်။
အရင်တုန်းကလိုအကြာကြီး တန်းစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ ပြီးတော့ ဘီလ်ကို စောင့်ပြီးထုတ်ရ၊ ဘီလ်ဆောင်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ၊ ပြီးတော့ တခါတခါ ဘယ်လောက်တောင် ဖုန်းပြောမိမှန်းမသိဘဲ လကုန်ကျမှ ဖုန်းဘီလ် အများကြီး ကျနေတာလဲ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး၊ တော်တော်လေး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မိသွားတယ်။
သေသေချာချာ ထပ်သိချင်တာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ပြောတဲ့ Call Center ဖုန်းနံပတ်ကို ဆက်ပြီး မေးကြည့်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘီလ် ဆောင်ထားတာ များနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သိချင်လို့ပါ။
အမျိုးသမီး အသံတစ်သံနဲ့ ဖုန်းပြန်ဖြေပါတယ်။ ချိုချိုသာသာပါပဲ။
“လူကြီးမင်းတို့ ဘီလ်ဆောင်တုန်းက စာရင်းထဲမှာ ငွေအများကြီးသွင်းမိလို့ ပိုနေတယ်ဆိုရင် Prepaid ကဒ်ပြောင်းတဲ့အခါ ကဒ်ထဲ ငွေပြောင်းထည့်ပေးပါမယ်တဲ့။
တကယ် ကောင်းတဲ့စနစ်ပါ။ ကျွန်တော် တော်တော်လေးအထင်ကြီးလေးစားမိပါတယ်။ အရင်ကလို ရုံးသွားစရာ၊ အချိန်ကုန်စရာ မလိုပဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးလို့ပါ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဟော………..သိပ်မကြာပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဖုန်းထဲကို နောက် Message တစ်စောင် ထပ်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။
ဘီလ်လာဆောင်ပါတဲ့။ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး ဆောင်ပါတဲ့။
တော်တော် စိတ်ညစ် သွားပြန်ပါတယ်။ ရုံးသွားပြီး ဘီလ် မဆောင်ချင်လို့ Prepaid ပြောင်းပါတယ်။ လာဆောင်ရဦးမယ်တဲ့ဗျာ။ ပထမပြောထားသလို Prepaid ကဒ် စနစ်ပြောင်းပြီးတဲ့အခါ စာရင်းထဲမှာ ပိုနေတဲ့ ငွေတွေကို ကဒ်စာရင်းထဲ ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့စာရင်းထဲမှာ အကြွေး ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကော…. ??????????
ပိုငွေကိုကျတော့ Prepaid ကဒ်ထဲ ပြောင်းထည့်လို့ရပြီး၊
လိုငွေကိုတော့ Prepaid ကဒ် ပြောင်းတဲ့အခါကျမှ တခါတည်း နှုတ်လို့မရဘူးလား။
မရဘူးလို့ ဆိုရင်ကော ဘာကြောင့် မရ ရတာလဲ…ရှုပ်သွားတာပါပဲ။ နည်းပညာက ပေါင်းတာနဲ့ နှုတ်တာ ဘာကွာလို့လဲ။ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးဗျာ။
ရှင်းနေတာကို ပြန်ရှုပ်အောင် လုပ်နေတယ်လို့ပဲ ခံစားရပါတယ်။ အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် လုပ်ရင်လဲ တခါတည်း လုပ်ပေးလိုက်ပါလားခင်ဗျာ..အခုတော့ ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။
စိတ်ညစ်နေတုန်းမှာ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဖုန်းဘီလ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ၀န်ဆောင်ခ ၅၀၀ ပဲ ပေးရမှာလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ၀မ်းသာအားရအနီးဆုံး စတိုးဆိုင် ရှိတဲ့နေရာပြေးသွားပြီး Service လုပ်ပေးတဲ့ ကောင်တာမှာ သွားဆောင်ပါတယ်။
အဲဒီက အမျိုးသမီးက ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပတ်မှတ်ပါတယ်။ နောက် သူ့ကွန်ပြူတာထဲမှာ On line billing ဆိုတဲ့ web page တစ်ခုဖွင့်ပြီး ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပတ် ထည့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကလဲ မကောင်းတော့ တစ်ခါနှစ်ခါနဲ့မရ၊ နောက်ဆုံးတော့ ဖွင့်လို့ ရသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကျသင့်ငွေပေးဖို့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်နေပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးက ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပတ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာ စာရင်းသွင်းထားတာရှိလားလို့ ထပ်မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကမရှိကြောင်းဖြေတဲ့အခါမှာ အဲဒါဆို ဘီလ်ဆောင်လို့ မရပါဘူးတဲ့။ ထပ်ရှုပ်သွားပြန်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျွန်တော့်က မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာ On line billing လုပ်ဖို့ စာရင်းသွင်းထားတာ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဒီစတိုးဆိုင်မှာ လာသွင်းစရာအကြောင်းရှိမှာလဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ဖာသာ အင်တာနက်ကနေပြီး ဘီလ် ဆောင်လိုက်မှာပေါ့။ အခုက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလဲမပြော၊ သေသေချာချာ မသိလို့ သွားမိတဲ့ကျွန်တော် သာ ဖတ်ဖတ်ကိုမောရတာပါပဲဗျာ။
Written By: Thomas @ Zeyar
Post by : Alin Karr Nya
1:51 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
ညမှာ ငါ နေ့အလင်းတန်းထဲကို တိုးဝင်ခဲ့တယ်
ငါ့ကို အသက်ရှူမ၀အောင်လုပ်တဲ့ ညက
ငါ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ၀ါးမြိုခဲ့တယ်
အားလုံးဟာ ဘာမှမရှိခဲ့သလို ပြောင်းလဲသွားတယ်…………
အိမ်မက် မက်ရင်းလမ်းလျောက်နေသူ၊ စကားပြောနေသူတွေ
11:56 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
ချစ်သူ . .
မရရှိလို့ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာကို
ကိုယ်ချင်းစာတတ်ခဲ့ပြီ . .
ဝေဒနာကို ခံစားတတ်နေပြီ . .
လက်မခံတတ်ခဲ့ပြီ . .
မျက်စိက ရုပ်သေဓါတ်ပုံတွေပဲ ရိုက်ယူထားကြတယ်ဗျာ။